EkwentịGap: Mmepe Ngwa Ngwa-Cross-Platform | Martech Zone
Ọ bụrụ n ’ị nweela ahụmịhe n’ etolite n’ọtụtụ asụsụ, ewezuga ebum n’uche C, ikekwe ị ga - enweta otu mmeghachi omume nwoke a mere:
Azutara m akwukwo a ma guo ya, lee fim, tinye ya HERE na m ka na-enweghị ike ime ka ụzọ m banye na ngwa nke na-ekwu, “Ndewo !wa!”.
Daalụ ịdị mma na enwere ụfọdụ ndị ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi dị iche iche ebe ahụ ghọtara nke a wee mepụta nnukwu ngwọta. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị mmepe na-emepe emepe maka webụ n'oge a, otu ndị nwere ikike wepụtara azịza dị egwu, EkwentịGap.
ekele Stephen Coley maka n'ọnụ!
Aug 14, 2009 na 4:09 PM
Onye mmezi na-enyekwa usoro na-abụghị Ebumnuche-C maka mmepe na iPhone. http://www.appcelerator.com/
Aug 20, 2009 na 11: 26 AM
dị jụụ, nke a dị ka ngwa na-adọrọ mmasị inyocha, m ga-agbakwunye nke a na m mastery ngwa mmepe mastery